दाजु रोजगारीको लागि परदेश : घरमा बुवाको निधन भएपछि भगवतीले सबै संस्कार आफैले गरिन ! - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
दाजु रोजगारीको लागि परदेश : घरमा बुवाको निधन भएपछि भगवतीले सबै संस्कार आफैले गरिन !
तीन सन्तान मध्य दाजु रोजगारीका लागि भारत गएका उतै हराए । घरमा दिदी बहिनी मात्र थिए । त्यसैवेला बुवाको निधन भयो । दाई पनि नभए पछि बुवाको धार्मिक संस्कार पुरा गर्ने दायीत्व छोरीले लिइन् । हिन्दू धार्मिक मान्यता र संस्कारमा बुवा आमाको अन्तिम संस्कार र किरिया गर्ने काम छोराको हो भनिन्छ ।
तर उदयपुर कटारी नगरपालिका वार्ड नम्बर ५ बरमझियाका बलबहादुर थापा मगरकी छोरीले भने त्यो परम्परा तोडिदिएकी छन् । दाजु नभए पछि उनले बुवा बलरामको मृत्यु पछि सन्तानले गर्नुपर्ने सबै संस्कार उनले गरिन् । उनले बुवाको पार्थिव शरिरलाई काँध दिएर घाट सम्म लगिन् । दागवत्ती दिइन् र किरिया पनि बसेकी हुन् । वुवाको शरिरलाई काँध दिएर घाट लैजाने १४ वर्षीया भगवतीले सबै संस्कार गरेकी हुन्
बुवाको मृत्यु पछि भगवतीलाई पारिवारिक दायित्व पनि थपिएको छ । परिवारका अन्य सदस्यको भरणपोषण गर्ने आर्थिक दायित्व उनीमाथि थपिएको छ ।दुःखको यो बेला उनको परिवारलाई सहयोग र सहानुभूतिको मात्रै होइन हौसला दिनेको पनि खाँचो रहेको पत्रकार रेणुका पराजुलीले बताइन् ।